Baaritaan ku socda Madaxweynihii hore ee dalka Ivory cost – SBC
Baaritaan ku socda Madaxweynihii hore ee dalka Ivory cost
Abidjan:- Masuuliyiinta Ivory cost ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo ee la la soo xiray laba toddobaad ka hor wax laga weydiinayo rabshadihii dhiiga ku daatay ee kadhaca dalkaas dooraashooyinkii kadhacay dalkaas dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay.
11 bishan april ayey ahyad markii Wasaarda gaashaandhiga ee Faransiiska, ay sheegtay in madaxweynihii hore ee dalka Ivory coast ay soo xireen ciidamada Alxasan Wattara oo ay taageerayeen kuwa Qaramada Midoobay iyo Faransiiska.
Laurent Gbagbo ayaa ku xiran Golf hotel oo ku yaala Abidjan oo ah saldhiga Qaramada Midoobay iyo Madaxweyne Alxasan Wattara.
Kaddib olole muddo dheer socday oo loo soo galay habka dimoqraadiyadda axsaabta badan, Gbagbo waxaa uu awoodda qabtay sanadkii 2000. .
Gbagbo, oo waqtigaas ahaa siyaasi yar, waxaa uu ka guulaystay hogaamiye inqilaab dalka ku qabsaday, general Robert , kaddib markii shakhsiyaad badan oo waaweyn loo diiday inay tartanka doorashada ka qayb galaan.
Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay waxay isku raaceen in Mr Wataara uu doorashada ku guulaystay. Laakiin Gbagbo.